Cosmogony: ihe ọ bụ, njirimara, akụkọ ifo na akụkọ | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka okwu a cosmogony. Ọ na-ezo aka n’akụkọ ifo dị iche iche na-akọwa mbido ndụ n’ụwa. Okwu a bu cosmogony dika akukoa dere, nwere ike izo aka na ihe omuma nke sayensi nke na-eleba anya na omumu na mmalite nke uwa. Agbanyeghị, nke a na-ejikarị eme ihe bụ ịtọlite ​​usoro akụkọ ifo banyere ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma maka mbara igwe na ihe ekwuru gbasara mbido ụwa.
1 Gịnị bụ cosmogony
3 Cosmogony na omenala Greek na China
Gịnị bụ cosmogony
Anyị maara na mmalite nke ụwa dị mgbagwoju anya na enweghị ike ịmata 1000% n'ezie. Enwere ọtụtụ echiche, nnukwu Bang bụ nke kachasị emetụta. Ihe a na-ejikarị eme ihe maka cosmogony bụ maka akụkọ ahụike banyere mmalite na ọmụmụ nke ụwa. N'ime ya, akụkọ ifo na akụkọ ifo na-etolite akụkọ chi dị iche iche na-agbakọta n'ọgụ dị iche iche ma na-agba mbọ ịmụ ụwa. Typedị akụkọ a dị na akụkọ ọdịnala Sumer na nke Ijiptka. Nke a pụtara na ọ dịla ezigbo mkpa n'akụkọ ihe mere eme ma gafee ọtụtụ ọdịnala.
E nwere ọtụtụ ụdị nke cosmogony ma ha azụlitewo ya site n'ọtụtụ ụdị ọdịnala n'akụkọ ihe mere eme niile. Na mkpokọta, nke ọ bụla n’ime ha nwere otu mbido ụwa niile na ọ bụ ọgbaghara. N’ime ogbaaghara ahu enwere ihe ndi anakpokoro na ịtụ maka enyemaka nke ike ma ọ bụ chi dị iche iche. Buru n'uche na ọtụtụ cosmogony anaghị elekwasị anya na sayensị ma ọlị. Ya mere, ha ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na mbara igwe.
Ọ bụ usoro nke akụkọ na akụkọ ifo na-ezo aka na tiori nke cinephilia edinam nke eluigwe na ala site na agha na akụkọ ifo nke chi dị iche iche chere ihu na ihu na-eme ka okike nke ụwa na ụwa.
Nke mbụ bụ ịmara ihe ọmụmụ ụwa. Enwere ike ịsị na ebumnuche bụ ịmụ banyere mmalite na mmalite nke ụyọkọ kpakpando na ụyọkọ kpakpando iji chọpụta afọ nke eluigwe na ala. Otú ọ dị, maka nke a, ọ na-adabere na otu set nke akụkọ ifo, nkà ihe ọmụma, okpukpe na sayensị banyere mbido eluigwe na ala. Ọ na-agba mbọ ịdabere akụkụ nke echiche ya na sayensị, mana mgbe ọ bịara ịdabere na akụkọ ifo, o nwere ntakịrị okwukwe.
Okwu a bu cosmogony nwere ihe omuma banyere mmalite nke uwa nke dika ihe omuma di ugbua na akwukwo ndi anabatara, nwere njikọ chiri anya na tiori nke nnukwu bang. Ma ọ bụ na ihe ọmụmụ ahụ na-amụkwa usoro nke cosmos ugbu a.
Ka anyị lee ihe bụ isi njirimara nke cosmogony:
O nwere ọtụtụ akụkọ ifo na-emegide onwe ha. A gbanwere akụkọ ifo ndị a n'oge mmepeanya ma taa ha anaghị adị otu ha dị na mbụ.
Ha nwere otutu nkwenkwe ụgha na assimilation akụkọ ifo na chi nke sitere na mbara igwe.
Ọ nabatara nke ọma n'Ijipt ma jiri ya mee ihe iji ghọta ma gosipụta oke ike okike nke chi dị iche iche nwere.
Site na cosmogony anyị enweghị ike ịlaghachi n'oge adị adị ma ọ bụ nke ọgba aghara mbụ nke ụwa na-amalitebeghị.
Gbalịa ịchọta ụzọ iji gosipụta eziokwu site na nghọta nke eluigwe na ala, ohere na mmalite nke chi. Buru n'uche na ọ na-anwa ịkọwa ihe niile site na ịkọ aha ọma jikọtara ya na mmadụ na ihe ndị sitere n'okike na-eme ya.
Okpukpe niile nwere cosmogony nke a pụrụ ịmata na usoro okike ma ọ bụ nnweta.
Okwu ahụ n’onwe ya lekwasịrị anya n’ọmụmụ banyere ọmụmụ ụwa.
Oge mbu ndi mmadu mepere anya nwere cosmogony nke choro ikowa ihe banyere ala na uwa site na akuko. Site na ngalaba a nke "sayensi" a na-enweta otutu akuko ifo banyere mmalite na ihe butere ihe ndaputa di iche iche.
Cosmogony na omenala Greek na China
Anyị maara na okpukpe ọ bụla nwere ụdị cosmogony. N'ihe banyere ọdịbendị ndị Gris, ọ nwere otu akụkọ nke nwere ọtụtụ nkwenkwe na akụkọ ifo banyere ọdịnala ndị Hellens banyere mmalite nke eluigwe na ala na mmadụ. Ọdịdị nke Theogony nke Hesiod bu isi iyi sitere na akuko ifo a na polo nke Iliad na Odyssey. Nye ndị Gris, mmalite ụwa bụ nnukwu ọgba aghara n'ime oghere ebe ụwa, ifo na mbido si malite. Waswa bụ ime ụlọ maka ezé, ala mmụọ dị n'okpuru ụwa na ụkpụrụ bụ ihe kwalitere mmekọrịta n'etiti ihe dị iche iche nke ihe.
Nime ogbaaghara niile, abali na ochichiri na ebili. Mgbe ọ na-agakọ njem ọnụ, ìhè na ehihie. Otu a ka ha si anwa ịkọ akụkọ okike nke ụwa site na akụkọ ifo.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere Cosmogony nke ọdịnala ndị China. Echiche nke dị na China gosipụtara nkwupụta nke Kai t'ien nke bụ akwụkwọ ederede nke edere na narị afọ nke anọ BC Ozizi a mere ka ụwa sie ike na ụwa abụọ kpamkpam wee kewaa ha abụọ site na anya nke 80.000 li (otu li bụ nhata ọkara kilomita). Ọzọkwa, echiche a mere ka nke a kwe omume Anyanwụ nwere dayameta nke 1.250 li ma na-agagharị okirikiri na mbara igwe.
Anyi nwekwara Christian cosmogony nke anyi ji eme uwa site na Jenesis, buru akwukwo mbu nke Baibul. Nke a bụ otú Chi nke Chineke bidoro kee ụwa na mbido. Ihe okike bu usoro nke n’eme site nawapu uwa na elu igwe, uwa site na mmiri, na ìhè n’etiti ochichiri. Nke a pụtara na e kere ụwa site na nkewa nke ihe ndị na-amalite site na ọgba aghara kpamkpam.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere cosmogony na ọmụmụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ahụhụ